Mon, Jul 13, 2020 at 1:00pm
बढ्यो मलेसिया जाने कामदारको मेडिकल शुल्क
काठमाडौं, १ असोज । राेजगारका लागि मलेसिया जाने कामदारको मेडिकल शुल्क बढेको छ ।दुईदेशबीच भएको श्रम समझदारी अनुरुप नै मेडिकल शुल्क बढेको हो । मेडिकलको सबै शुल्क भने मलेसियाली रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने भनिएको छ । नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारको मेडिकल परीक्षणबात अब ७ हजार ६६४ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ४ हजार ५ सय छ भने मेडिकल प्रोसेसिङ चार्ज २ हजार..
शान्ति मिसनमा जाने सिपाहीको भत्ता मासिक ८५ अमेरिकी डलरले बढ्यो
काठमाडौँ, ३१ भदौ । नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा सहभागी हुने सिपाहीलाई खाइपाइ आएको भत्तामा प्रतिमहीना ८५ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले बन्दोबस्ती कार्य गर्ने सिपाहीले हाल प्राप्त गरिरहेको एक हजार २९ अमेरिकी डलर भत्तामा ८५ डलर थप गरी प्रतिमहीना एक हजार ११४ अमेरिकी डलर कायम..
आज कति छ प्रतिताेला सुनचाँदीको मूल्य ?
काठमाडौं, ३१ भदाै । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। सोमबार ७१ हजार ३०० मा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ मंगलबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेकाे छ । यस्तै तेजावी सुन तोलामा ७१ हजारमा कारोबार भएको छ । साेमबार सुन आइतबारकाे तुलनामा ताेलाकाे ११ सयले बढेर ७१ हजार ३०० कायम भएकाे थियाे । यस्तै चाँदी मंगलबार तोलामा ८ सय ६५ मा कारोबार भएको..
१० हजारले बढ्यो शान्ति सेनामा जाने सिपाहीको भत्ता
काठमाडौं, ३१ भदाै । नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा सहभागी हुने सिपाहीलाई खाइपाइ आएको भत्तामा प्रतिमहीना ८५ अमेरिकी डलर अर्थात करिब १० हजार नेपाली रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले बन्दोबस्ती कार्य गर्ने सिपाहीले हाल प्राप्त गरिरहेको एक हजार २९ अमेरिकी डलर भत्तामा ८५ डलर थप गरी प्रतिमहीना..
फेरी ह्वात्तै बढ्याे सुनकाे मूल्य, कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
काठमाडौं, ३० भदाै । सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। नेपाली सुनचाँदीको बजारमा छापावाल सुनको ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरेहेको छ । त्यसैगरी, तेजाबी सुनको मूल्य ७१ हजारमा कारोबार भएको छ। चाँदी तोलामा ८ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आइतबार छापावाल सुन ७० हजार २ सयमा कारोबार भएको थियो र तेजाबी सुन ६९..
पोखरा, ३० भदौ । गण्डकी प्रदेश सरकारले नजिकिँदै गरेका दशैँ तिहारलगायतका चार्डपर्व लक्षित गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । सरकारका तर्फबाट आइतबार यहाँ मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक विकास तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले चाडपर्वका समयमा हुनसक्ने कालोबजारी, मिसावटलगायतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । बजार अनुगमनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा..
काठमाडौं, ३० भदौ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको दुई महिना भयो। उनीहरूलाई उद्योग सञ्चालकले पेस्की खर्च मात्रै दिएका छन्। पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) चाहिन्छ। प्यान नहुँदा पारिश्रमिक दिन समस्या भएको मुरारका इन्डस्ट्रिजका निर्देशक प्रदीप मुरारका बताउँछन्। यस क्षेत्रका ६ सयभन्दा बढी उद्योगमा ८० प्रतिशत कामदार भारतीय छन्। ‘नेपाली कामदार मगाउँदा आउँदैनन्। भारतीयका भरमा उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता छ’,..
सुनको मूल्य लगातार ओरालो, कति छ आज ?
काठमाडौँ, २९ भदौ दुई महीनादेखि लगातार उकालो लाग्दै गएको सुनको मूल्य पछिल्लो साता भने ओरालो लागेको छ । सुनको मूल्य घटेर प्रतितोला ७० हजार २ सय भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आइतबारका लागि प्रतितोला ४ सय घटाएर नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो । शुक्रबार नेपाली बजारमा प्रतितोला सुन ७० हजार ६ सयमा कारोबार भएको थियो । यस्तै तेजावी सुनको मूल्य..
बुटवल, २७ भदौ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीन र भारत नेपालका विश्वाशिला विकास साझेदार बन्दै गएको बताउनुभएको छ । प्रेस सङ्गठन नेपालले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले नेपालसँग अन्तरदेशीय सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जाँदा दुबै छिमेकी देशको नेपालप्रतिको रुचि र आकर्षण पनि बढ्दै गएको बताउनुभयो । यसैसाता नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त रुपमा भएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन, केही दिनअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री र..
लगातार घट्दै सुनकाे भाउ, कति छ आज ?
काठमाडौं, २७ भदाै । केहि दिनदेखि लगातार घटेकाे सुनकाे मूल्य आज पनि घटेकाे छ । बिहीबारकाे तुलनामा शुक्रबार सुनकाे मूल्य २ सयले घटेकाे हाे । हिजाे नेपाली बजारमा सुन प्रतिताेला ७० हजार ८ सयमा काराेबार भएकाे सुन आज प्रतिताेला ७० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाली सुनचाँदी व्यवसायि महासंघले जनाएकाे छ । त्यसैगरी, तेजाबी सुन ७० हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी तोलामा भने ८७० रुपैयाँमा..
काठमाडौँ, २६ भदौ । दुई महीनादेखि लगातार उकालो लाग्दै गएको सुनको मूल्य पछिल्लो साता भने ओरालो लागेको छ । गत साताको शुक्रबारसम्म वृद्धि भइरहेको सुनको मूल्य आइतबारदेखि ओरालो लागिरहेको छ । शनिबार प्रतितोला रु ७२ हजारमा कारोवार भएको छापावाला सुन आइतबार प्रतितोला रु ५०० ले घटेर रु ७१ हजार ५०० पुगेको थियो । त्यस्तै मङ्गलबार सुनको मूल्य घटेर रु ७१ हजार पुगेको..
काठमाडौं, २६ भदौ । सामाजिक सुरक्षाकोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या ५० हजार नाघेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । बुधबारसम्मको तथ्यांकमा ४ हजार ७९० संघ/प्रतिष्ठान तथा संस्थाका कुल ५० हजार १४० जना श्रमिक सचूीकतृ भएका कोषका कायर्कारी निदर्शेक कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिए । कोषका अनुसार अहिलेसम्म सूचीकृत हुने रोजगारदाता कम्पनीमा मुलुकका ठूला व्यावसायिक घरानाअघि देखिएका छन् । अहिलेसम्म सानालगानीकर्ताले भने विभिन्न बहानामा अटेरी..
काठमाडौँ, २५ भदौ नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले अन्य मुलुकका तुलनामा राम्रो प्रतिफल लैजाने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सरकारले यहाँ लगानी गरी उचित प्रतिफल पाउने मौका नगुमाउन आग्रह गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा जारी ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन, २०१९’ अन्तर्गतको ‘पूर्वाधार विकास नीति र वित्तीय स्रोत परिचलान’ विषयको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज..
विराटनगर, २५ भदौ नेपालका इँटा उद्योगीहरुले प्रत्येक हप्ता रु ३० करोड रकम ग्रामीण क्षेत्रका कामदारलाई भुक्तानी गर्ने गरेको बुधबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बताइएको छ । कोशी अञ्चल इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घको नवौँ साधारणसभामा प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विदेशी कामदारलाई न्यूनीकरण गरी स्वदेशी कामदारलाई दक्ष बनाई रोजगार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी निवारणमा..
काठमाडौँ, २४ भदौ नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि रु एक अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर बोर्डले बजेट ल्याएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिको सोमबारको बैठकले यस वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । अघिल्लो वर्षको भन्दा १२ करोड कम बजेट आएको छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६..
प्रधानसेनापतिकाे सम्पत्ति : ५५ ताेला सुनसहित.. (विवरणसहित)
काठमाडौँ, २४ भदौ । नेपाली सेनाका बहालवाला प्रधानसेनापतिले पहिलोपटक आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मंगलबार आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । उनको सम्पत्ति विवरण नेपाली सेनाको वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ । चल सम्पत्तितर्फ प्रधानसेनापति थापासँग ५५ तोला सुन, ५ सय ९० तोला चाँदी र हिराको हार र औँठी रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत प्रधानसेनापति..
सावधान ! कतै तपाईंको नाममा प्यान दर्ता भएको त छैन ? (विभागको सूचनासहित)
काठमाडौँ, २४ भदौ तपाईंलाई रोजगारी दिने शर्तमा कसैले करको दायित्वसमेत थोपरिरहेको त छैन? रोजगारदाताले तपाईंको कागजात दुरुपयोग गरिरहेको त छैन? यसबारेमा समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बजारमा मजदुर वा कम्पनीसँग असम्बन्धित व्यक्तिको नाउँमा प्यान दर्ता गरेर कारोबार गर्नेहरु भेटिए पछि सावधान गराएको छ । विभागले गुणस्तरीय दर्ता (Quality Registration) मा जोड दिँदै सचेत हुन आग्रह गरेको छ । कतिपय व्यवसायीले..
ललितपुर, २४ भदौ महालक्ष्मी नगरपालिकाको आव २०७५।०७६मा लक्ष्य अुनसारको राजश्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । नगरपालिकाका कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्रको अनुगमन, निरीक्षण र जनचेतना फैलाउने काममा ढिलाइ गरेका कारण अपेक्षा गरेअनुरुपको राजश्व सङ्कलन गर्न नसकिएको बताइएको छ । गत आवमा रु १९ करोड ८७ लाख १४ हजार राजश्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा रु नौ करोड ८४ लाख ९४ हजार राजश्व सङ्कलन भएको लेखा..
काठमाडौँ, २४ साउन । पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याइन थालेपछि ढुवानी खर्च कम भई नेपाली बजारमा उपभोक्ताले राहत पाउन थालेका छन् । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल आयाल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गरी आज मध्याह्न १२ बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल÷मट्टितेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु दुई÷दुई घटाएपछि उपभोक्तालाई राहत भएको हो । मूल्य घटेसँगै प्रतिलिटर डिजेल÷मट्टितेल रु ९५ र..
पाइपलाइन सञ्‍चालनसँगै घट्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य
काठमाडौं, २४ भदौ । पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलको साविक मूल्यमा २ रुपैयाँ घटाइएको निगमका कार्यकारी प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । नयाँ मूल्य लागू भएसँगै पेट्रोलको १०७ र डिजेल तथा पेट्रोलको मूल्य ९५ मा झरेको छ । यसअघि पेट्रोलको मूल्य १०९ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य समान ९७ रुपैयाँ थियो । समायोजन भएको नयाँ मूल्य मंगलबार दिउँसो १२ बजेबाट लागू हुने जनाईएको छ..
सुनको मूल्य घट्यो, मंगलबार १ तोलाको ७१ हजारमा कारोबार
काठमाडौँ, २४ भदौ । मंगलबार सुनको मूल्य घटेको छ । अघिल्लो दिनको भन्दा प्रति तोला सुनको मूल्यमा सात सय रुपैयाँले कमी आएको हो। सोमबार ७१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन मंगलबार तोलामा ७ सयले घटेर ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा समेत गिरावट देखिएको छ। प्रति तोला चाँदीको मूल्य १० रुपैयाँले..
‘व्यवसायीको उत्पादनलाई बजारमुखी बनाउने’
ललितपुर, २३ भदौ ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सले सो क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीको उत्पादनलाई बजारमुखी बनाउँदै अघि बढ्ने बताएको छ । आज जावलाखेलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा कमर्सले व्यावसायिक हकअधिकार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यो वर्ष ललितपुरमा कमर्सको स्थापना गरिएको जानकारी दिएको छ । सो अवसरमा कमर्सका अध्यक्ष पुष्परत्न शाक्यले यस क्षेत्रमा रहेका हरेक व्यवसायीको हितमा कमर्सले क्षमताका साथै दक्षता विकासको काम गर्ने छ भन्दै यहाँका..
डोटी, २३ भदौ । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहहरुले खरीद गरेका यातायातका साधनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयको ध्यान गएको छ । आफूखुशी यहाँका स्थानीय तहले धमाधम गाडी किनेको समाचार प्रकाशित तथा प्रशारित भएपछि आयोगले डोटीका सबै स्थानीय तहसँग सवारी साधन खरीदसम्बन्धी कागजपत्र पेश गर्न माग गरेको बताइएको छ । यातायातका साधन खरीदमा मनोमानी गरेको भन्दै स्थानीय तहसँग आयोगको कञ्चनपुर कार्यालयले..
काठमाडाैं, २३ भदाै । दसैं-तिहारलगायत ठूला चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर आजदेखि देशभर ७३ स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन भएका छन् । नजिकिँदै गरेको दसैंललाई लक्षित गर्दै सरकारले सोमबारबाट काठमाडौं उपत्यकासहित देशका ७३ स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेकाे हाे। चाडबाडका बेला उपभोक्ता ठगिने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका ९ ठाउँसहित देशका मुख्य सहरमा ७३ वटा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको हो। यस्ता पसल कात्तिक १६ गतेसम्म सञ्चालनमा आउने..
आज फेरी बढ्याे सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
काठमाडौं, २३ भदाै । आज नेपाली बजारमा सुन मूल्य बढेकाे छ । आइतबारकाे तुलनामा आज साेमबार सुन प्रतिताेला २ सयले बढेकाे हाे । आइतबार तोलामा ५ सयले घटेको सुन सोमबार ७१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आइतबार सुन तोलाको ७१ हजार ५ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। यस्तै चाँदीको भाउमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। आज चाँदी..
काठमाडौं, २३ भदौ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई बद्नाम गराउन मानिस परिचालित भएको बताएका छन्। काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रलाई कमजोर देखाएर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो नहान्न आग्रह गरेका छन्। उनले अर्थतन्त्र डुब्दा लाइफ ज्याकेट नै लगाएर आएको रहेछ भने पनि सँगै डुब्ने भन्दै सजग हुन गरेको आग्रहप्रति पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थशास्त्रीले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्। दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्री..
अर्थतन्त्रको सूचकहरु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि भ्रम छर्न मानिसहरू परिचालित छन् : अर्थमन्त्री
काठमाडौं, २२ भदौ । मुलुकभित्रैबाट देशको अर्थतन्त्रलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुःख व्यक्त गरेका छन् । अर्थतन्त्रको सबै सूचकहरु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि सरकारविरुद्ध भ्रम छर्न मुलुकभित्रबाटै मानिसहरु परिचालित भएको उनले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को दशौं वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले साे कुरा बताएका हुन् । ‘सरकारले सार्वजनिक गरेको तथा निजी क्षेत्रले छाप लगाएर सार्वजनिक..
चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै खसी बोका खरीद बिक्री केन्द्र स्थापना
मुग्लिन, २२ भदौ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा खसी बोका खरीद बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको छ । वडा नं ६ मा रहेको चण्डिभञ्ज्याङ महिला उद्यमी सहकारी संस्था लिमिटेडले किसानहरुको सहजताका लागि मुग्लिन नजिकै कालिखोलामा पहिलोपटक खसीबोका खरीद बिक्री केन्द्रको स्थापना गरेको हो । केन्द्रको शनिबार इच्छाकामना गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्नुभयो । उहाँले गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकेमा बजारीकरणको समस्या नहुने..
जीवनस्तर उकास्न सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका
काठमाडौं, २२ भदौ । सहकारीकर्मीहरूले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिकस्तर वृद्धि गर्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन् । पद, वर्ग, जात, लिंग र रकमका आधारमा सहकारीमा विभेद नहुने उनीहरूले बताए । न्युरोडस्थित ऐच्छिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको शनिबार भएको नवौँ वार्षिक साधारण सभामा सहभागीले सहकारी आन्दोलनको चर्चा गर्दै महत्वबारे स्पष्ट पारेका हुन् । प्रमुख अतिथि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का..
काठमाडौँ, २१ भदौ नेपाल र चीनबीच आगामी सोमबार दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा राजधानीमा हुने प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता आर्थिक र विकास साझेदारीमा केन्द्रित हुने भएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भोलिदेखि हुने नेपालको औपचारिक भ्रमण र द्विदेशीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताबारे रासससँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल–चीन सम्बन्धका समग्र पक्षका साथै पारस्परिक हित र चासोका सबै विषयमा विचारविमर्श हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले दुई देशबीच..
Results 1683: You are at page 11 of 57